Adobe Creative Cloud: Akhriso Daabacada Wanaagsan ee Shatiyada! | Martech Zone
Talaado, Nofeembar 7, 2017 Douglas Karr
Markii Adobe Creative Cloud la bilaabay, waan isqoriyay! Mar dambe ma iibsan doonaan rukhsadaha qaaliga ah iyo maareynta furayaasha DVD… kaliya soo degso oo rakib hadba sida loogu baahdo. Waxaan haynaa koox layaableh oo ka shaqeysa naqshadaheena, laakiin badiyaa waa inaan sameynaa tafatir deg deg ah ama isku hagaajin kadib markaan ka helno feylasha naqshadeeyaasheena, sidaas darteed waxaan iibsaday shati. Lammaanahayga ganacsiga wuxuu bilaabay inuu caawiyo, sidaas darteed waxaan u iibsaday liisanka labaad iyada, sidoo kale. Ka dibna mid ka mid ah macaamiisheennu ma uusan lahayn miisaaniyad liisan laakiin wuxuu u baahday inuu wax ka beddelo faylasha waqti ka waqti, markaa waxaan u iibsaday liisanka iyaga.
Marnaba Ma Akhrinin Daabacaadda Fiican
Waxaan u maleynayay inaan kaliya bixinayo khidmadda liisanka bil kasta oo aan ku dari karo oo ka saari karo rukhsadaha sida loo baahan yahay. Waxaan ogaaday dariiqa adag ee taasi kiiska uusan aheyn. Ka dib markii ay jaalkeyga ganacsi wada furaan wakaaladeeda isla markaana macmiilkeygu u fasaxay shaqaalaha… Waxaan is arkay aniga oo bixinaya laba shati oo aan la isticmaalin bil kasta. Ka dib markii aan ku turunturooday guddi maamul oo xun oo loogu talagalay Adobe Creative Cloud oo aan ka saaray labada isticmaale, waxaan ogaaday in tirinta liisanka ay sidiisii ​​ahaatay.
Raadin deg deg ah oo ku saabsan “ruqsadaha ka saar” saldhigooda aqooneed waxay ku jawaabtay jawaabta cidina weligeed rabin wants la xiriir taageerada. Ugh… Waxaan furay daaqad lagu sheekaysto. Waxaan u maleynayay in laga yaabo in qof igala hadlo inuu naafo ka dhigaayo. Kadib 23 daqiiqo iyo 51 ilbiriqsi, way sameeyeen. Laakiin ma noqon karto sababta aad u fikirto.
Wadahadalka dhabta ah ayaa kor lagu soo daray si aan kuu tuso dareenka macno darrada ah ee la igu tuuray, taas oo gebi ahaanba iska indhatirtay xaqiiqda ah inaan isticmaalayo liisankayga. Waan ogahay sida weyn ee barnaamijku u yahay, aniga liisan iibsaday!
Shirkad le'eg Adobe waa inay si daacadnimo ah u xishooto iyadoo adeegsanaysa istaraatiijiyaddan ay macaamiishooda kaga xayuubinayaan xoogaa doollar ah. Ma aanan ogeyn inaan si kama ’ah u saxiixayo qandaraas sanadle ah oo cusub. Waan garwaaqsanahay ganacsiyada qaarkood inay leeyihiin qarash adag oo saaran macaamiisha, laakiin taasi kuma jirto Adobe Creative Cloud. Si la mid ah barnaamijyada kale ee SaaS, waa inaan awood u yeeshaa inaan ku daro oo ka saaro liisanka isticmaalaha sida loogu baahan yahay. Sababta aan uqeexay waxay ahayd inaan ahay qof si daacad ah u adeegsada oo qadarinaya qiimaha uu leeyahay barnaamujkiina anigoo raalli ka ah.
Hadda waxaan bixinayaa 300% kharashka liisankayga ee Adobe Creative Suite labada liisanka kale ee nasanaya. Adobe, gabi ahaanba waan ku soo wici doonaa July 16, 2018. Waxaa laga yaabaa inay tahay waqtigeygii aan ku heli lahaa barnaamijyo kale oo beddel ah.
Digniin: Sidoo kale ma jiraan wax ikhtiyaar ah oo ku saabsan guddiga maamulka si loo joojiyo is-cusboonaysiinta otomaatiga ah.
Tags: adobeadobe cloud Cloudadobe suite hal abuur lehadobe shatigadaruurta hal-abuurka ahRuqsadaha